Fihetsiketseham-pahasalamana "Google My Business" Essentials Tsy maintsy fantatry ny SEO rehetra
Maro ny orinasa manana birao ara-batana sy tranokala e-commerce. Mamporisika ny mpanjifaNy hividy amin'ny magazay ara-batana dia zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny vola miditra. Ampiasao ihany koa ny fizotry ny Search Engine Optimization (SEO)Ny fampitomboana ny varotra mpanjifa dia mampitombo ny soatoavin'ny varotra Google dia nampiditra fampiharana feno izay manatsara ny fitantanana ny orinasatoerana. Azo ampiasaina ny fampiharana amin'ny fampiasana fomba fikarohana Google tsotra.
Frank Abagnale, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital Services, dia manome ny famaritana ny fampiharana ho anao mba hanararaotra tanteraka ireo endri-javatra.
Karazana ny Google Business App:
Ny mpampiasa dia afaka mitantana sehatra orinasa maromaro amin'ny fampiasana fitaovana iray - ενδοεπικοινωνια με καμερα chicco.
Ny tompon'ny orinasa dia afaka manova ny anarana, ny adiresy, ary ny ora fiasan'ny orinasa.
Ny mpampiasa dia afaka mandinika sy mamaly ireo mpandinika mpanjifa amin'ny alalan'ny fampiharana.
Nahavita mora tamin'ny alalan'ny sehatra Google+
ny famoahana sary sy lahatsoratra.
Manatsara ny fahitana amin'ny aterineto sy ny fifandraisana amin'ny mpanjifa ny fampihetseham-peo avo lenta.
Ny fampiharana Google My Business nohavaozina dia manana endri-javatra fanampiny izay mahasarikaho an'ny tompona orinasa. Ireo fanampiny fanampiny ireo dia ahitana:
Manaraha ny fomba fitantanana ny orinasa amin'ny Google+, Google Maps, ary ny fikarohana Google.
Diniho ny fampiasana fampihetseham-po nampidirin'i Google +.
Fidio ny tsipiriany amin'ny tsipiriany momba ny mpanjifa sy ny fampahalalana ny toerana.
Mitantana toerana any amin'ny fotoana rehetra..
Asehoy ny toerana misy ny toerana sy ny adiresy mailaka ho an'ny fandraharahana izay efa voafetra ny asa.
Azo ampiasaina amin'ny Google Play ny app Android. Ankoatra izany, ny rindrambaiko iOS dia azo alefaavy amin'ny App Store an'ny Apple. Afaka maimaim-poana na manatsara ny rindrambaiko Google My Business. Ny Google Google Business vaovao dia mifamatotra amin'ny SEOny teny fanalahidy, ny fampiharana YouTube, ary ny app Google Analytics, mba hampidirana ireo angona na vaovao ilaina mba hamantarana ny vaovao momba ny toerana vaovao.
Fahafantarana ny Google Business
Ny fizarana Google My Business Overview dia manondro ireo singa manan-danja amin'ny app.Ny pejin-pianakaviana Google My Business dia manome fampahalalana mahasoa momba ny fampiasana ny app. Tsy misy ny vola miditra amin'ny fampiasana ny rindrambaiko. Ilaina fotsiny izanyny fotoana sy ny ezaka fampandrenesana vaovao ny mpampiasa. Ny tompona orinasa manana toerana maromaro dia tokony hametraka laharam-pahamehana miorina amin'ny volatombony na tombontsoa ara-barotra. Ny toerana dia azo ampidirina tsirairay na ampahany amin'ny môtô iray raha toa ka mihoatra ny 10. Ny orinasaNy tompony dia tokony hampivelatra ny kaonty momba ny fandraharahana raha toa ny olona maromaro no mitantana ny toerana.
Fanatsarana ny fikarohana ao an-toerana
Ny fikarohana ao an-toerana dia midika ny fizotry ny SEO. Ny antsipiriany kokoa noho ny Google fototra,Bing, sy ny fikarohan'i Yahoo amin'ny aterineto. Ny fikarohana ao an-toerana dia mamokatra valiny amin'ny fampiasana ny rafitra fandraketana; ohatra, Google Maps, Maps Apple, Foursquare,Pejy jadona, ary Mpanolo-tsaina Trip. Ny SEO dia manatsara ny endriky ny raharaham-barotra sy ny fifamoivoizana amin'ny mpanjifa. Midika izany fa ny fizarana data manan-danjatoerana an-jatony maro. Ny fampivoarana ny fikarohana ao an-toerana dia mitaky sehatra rindrambaiko avo lenta tahaka ny Google My Business. Izany no tena izyfikarohana anaty aterineto manerantany. Ny sehatra sarintany ambony amin'ny app dia tena zava-dehibe amin'ny fanatsarana ny fikarohana ao an-toerana ho an'ireo orinasa.
Ny fampiharana Google My Business dia ilaina amin'ny fampivoarana ny mijery an-tserasera amin'ny orinasa iray.Ny fifamoivoizana mpanjifa dia ambony hatrany amin'ny tranombarotra izay manana fisiana goavana amin'ny aterineto. Ny tanjon'ny tompona orinasa iraymba hamolavolana sarobidy avo lenta avy amin'ireo mpanjifany mitsidika ireo tranonkala an-tserasera.